Uhlobo lwe-SEO: Yonke kunye Naphezulu nge-Semalt
I-SEO imele "ukukhangela injini yokukhangela." Enye yezona ndlela ezibalulekileyo zokufumana i-traffic quality kwiwebhusayithi yakho. Ngamanye amagama, sinokuthi injini yokukhangela ukulungiswa kwindlela yokuqhuba iindwendwe eziphilayo kunye nemibono yemvelo kumaphepha akho ewebhu. Zonke iinjongo zokukhangela ezifana neBing, Yahoo, kunye neGoogle, eziyizona zixhobo eziphambili zokukhangela, sebenzisa iindlela ezahlukeneyo ukubeka amanqaku ewebhu, umxholo obhaliweyo, iividiyo kunye namaziko aneziphumo zazo. Unokufumana isikhundla esilungileyo kwimiphumo ye-injini yosesho kuphela xa usenze kakuhle ukwenza injini yokukhangela - vps ddos protection cheap. Inkqubo ehlawulwayo, kwaye kufuneka ulungele ukutshala imali kakhulu ukuba ufuna ukubona indawo yakho kwikhasi lokuqala le-Google okanye ezinye iinjongo zokusesha.
U-Lisa Mitchell, uMphathi weNtsebenzo kuMthengi we-12 (Semalt yeeDivital Digital, unika apha inkcazo ecacileyo yeendidi ze-SEO nokubaluleka kwazo.
Kukho ezintathu zazo: umkhonto omhlophe we-SEO , i-hat (black) ye-SEO , kunye ne-SEO.
I-hat ye-White SEO yindlela eyaziwa kakhulu kakhulu kwaye isetyenziswe ngokubanzi esisebenzisa izicwangciso zokuphucula i-rankings yejini injini..Iquka iindlela ezithile kunye neendlela zokwenza indawo yakho ibonakale kwiziphumo zeenjini zokukhangela. Ngokomzekelo, kufuneka ubhale umxholo womgangatho, faka amagama angundoqo, ulungiselele iwebhusayithi yakho, ukulungiswa kwe-HTML nokuhlaziya isayithi lakho ngokwemigaqo nemigaqo yeGoogle. Oku kuya kukunceda ukuba ube nokubonakala kakuhle kwiinyanga ezimbalwa. Ngakolunye uhlangothi, i-hat yangomnyama i-SEO i-short cut-cut to find a good rank in the search engine. Akusiqhinga sesikhathi eside kwaye sinokungalungi. Kuquka isakhiwo esingasesikweni sokuqhagamshelanisa isakhiwo , ukukopisha umxholo nokuxhaphaza ukusebenza kwendawo yonke. Kwakhona kubandakanya ukugxilwa kwegama elingundoqo, umbhalo ofihlakeleyo, kunye neenxibelelwano kunye nokuvala. I-Gray hat ye-SEO yintsebenziswano yesibini yomkhono we-SEO kunye ne-hat yangomnyama ye-SEO. Kule ndlela, awukwazi ukusebenzisa iindlela ezilungileyo zokufumana amanqanaba angcono kwiinjine zokukhangela, okanye iindlela ezimbi ziphunyezwa ngokupheleleyo. Le ndlela isetyenziswe ngokubanzi kwiinkampani ze-SEO kwaye ibandakanye iintlobo ezintle zokuziphatha kunye nezimbi.
Ubani u-SEO ofanelekileyo?
Ukuphuculwa kweenjini zophando yindlela efanelekileyo yokutsala abantu abaninzi nakwiziko lakho kwaye wandise ukuthengisa kwakho. Kuyindlela efanelekileyo kulabo abafuna ukunika ishishini labo ithuba elitsha. Kukhuselekile ukuthetha ukuba i-internet ye-intanethi igxilwe ngamakhulu ukuya kumawaka ewebhusayithi. Kwiimeko ezinjalo xa ukhuphiswano olunzima kakhulu, akunakwenzeka ukuba iwebhusayithi yakho yezoshishino iphile ngaphandle kwe-SEO. Kufuneka ukhuphe ukuchitha imali eninzi kwiintengiso kunye nemikhankaso ehlawulwayo. Kunoko, ugxininiso lwakho kufuneka lube kwisakhiwo sokwakheka kwekhwalithi kwiwebhusayithi yakho, ukubhala umxholo wokunxibelelisa injini, nokuphucula isayithi lakho ngokwemiqathango nemigaqo yeGoogle.
Ukuphuculwa kweenjini ze-injini okanye i-SEO akufanele kuthathwe ngokungenanto. Kubalulekile kuyo nayiphi na ishishini. Iquka ezininzi iindlela, iindlela kunye nezicwangciso. Uya kufuneka uhlawule ingqalelo kwi-SEO yomibini kwi-SEO kunye ne-SEO ye-off-page. Ukuba ufuna ukubona indawo yakho kwiphepha lokuqala leGoogle kwaye ufuna ukunyusa ukuthengisa kwakho, kufuneka uhambe kunye nokwenza uphando lwenjini kunye nokuchitha imali ngokuqesha i-SEO yengcali.